WhatsApp inogamuchira iyo nyowani nyowani inogadzirisa zvimwe zvikanganiso | IPhone nhau
WhatsApp inogamuchira iyo nyowani nyowani inogadzirisa zvimwe zvikanganiso
Zvishoma zvasara zvekushandisa mameseji izvo zvisina kunetsekana zvakanyanya nezvekuvandudza kana vhezheni itsva yeIOS yasvika, iyo yaishandisa kunatsiridza "mwedzi yakawanda" yega yega kana kuti yakangotumira kutumira mameseji pasina zvimwe. WhatsApp yakagadziridzwa kwenguva yakati uye inogamuchira kuvandudzwa nguva zhinji uye svondo rapfuura vhezheni 2.17.30 yakasvika iine zvinhu zvinoverengeka zvinonakidza zvitsva senge sarudzo yekusefa mafoto ako, mavhidhiyo kana maGIF, boka maforamu mualbum uye nzira pfupi kupindura meseji nekukurumidza. Nguva ino iyo vhezheni inowanikwa muApp Store ndeye 2.17.31 uye inowedzera dzimwe mhinduro kumatambudziko anowanikwa mune yapfuura vhezheni.
Vamwe vashandisi vaive nemamwe matambudziko ekushandisa uye mashandiro mumachats uye nerudzi urwu rwezvishoma asi zvichidikanwa zvekugadziriswa, zvinoita sekunge matambudziko agadziriswa. Chero zvazvingaitika, iri idzva vhezheni nekuvandudza mukushanda kwechishandiso uye hapana zvitsva zvekushandisa zvinowedzerwa. Zvirinani kubva pane izvo zvatinoona mumanotsi ekushandisa kubvira vachiri mashoko akafanana kupfuura mushanduro yapfuura 2.17.30 yakasvika svondo rapfuura kune vashandisi veIOS.
Hapana mubvunzo kuti kubvira Facebook payakavhara kutengwa kweWhatsApp kwe 21.800 bhiriyoni emadhora pakupera kwa2014 kunyorera kwave nani mune zvese zvinhu. Mune ino kesi hatisi kutaura nezvekuwedzera nhau kumessage application senge WhatsApp, isu tiri kutaura nezve iyo mhinduro kumatambudziko akaonekwa vhiki imwe mushure mekuwedzera kugadzirisa. Saka zvakanaka kune WhatsApp uye nemunhu wese kugadzirisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » App store » WhatsApp inogamuchira iyo nyowani nyowani inogadzirisa zvimwe zvikanganiso
Daniel Cip akadaro
Ndine iphone 7 ine iyo IOS11 Beta.
Ini nguva pfupi yadarika ndakagadzirisa iyo WhatsApp uye ndazviwana izvozvi kuti handikwanise kunyora meseji, iyo skrini iyo yakanyorwa inonyangarika, kana ndikasiya ndopinda zvakare ndinoona zvakanyorwa kana kana ndikanyora ndikabata meseji yapfuura kunyora kwacho kunoonekwa. Ndine urombo kuve nekuvandudza !!!.
Ndinovimba munogona kumukwazisa munguva pfupi iri kutevera.
Pindura kuna Daniel Cip
Chokwadi ndechekuti WhatsApp yanga ichigadzirisa zvese, zvisinei hazvo iyo iPhone inovhara mitambo yangu pandinoivhura, izvo zvandinofungidzira kuti hazvina chekuita nazvo.
Zvinoenderana neongororo, vazhinji vashandisi vanosarudza iyo Amazon Echo kune iyo Apple HomePod
Apple inotangisa yechitatu yeruzhinji beta yeIOS 10.3.3